IkhayaTURKEYIsifunda soLwandle OluMnyamaI-52 ArmyIlungiselela i-Çambaşı Ski Center Season
Ilungiselela i-Çambaşı Ski Center Season
04 / 10 / 2019 Levent Elmastaş I-52 Army, JIKELELE, Isifunda soLwandle OluMnyama, TURKEY, TELPHER 0
i-cambasi ski resort ilungiselela isizini
ETurkey Çambaşı umehluko emangalisayo lokuba esiseduzane kolwandle elungiselela ski sonyaka Ski 2019-2020.
I-Çambaşı Ski Center etholakala kuma-2000 acres endaweni ephakeme ye-650 nguMasipala wase-Ordu Metropolitan futhi itholakala ebangeni le-52 km ukusuka enkabeni yedolobha; I-Four Season Çambaşı Ihhotela, Indawo yokudlela yase-Slalom Café, iZirve Café, izitolo zokudla ezisheshayo, amakamelo okushushuluza kanye namagumbi asikiwe alungele isikhathi sasebusika.
Esikhungweni se-Çambaşı Nature Facility, okuthandwa kakhulu ngabathandi bashushi esifundeni, ukusungulwa kwemithambeka emisha, ukubikwa kwemithambeka, ukulondolozwa kwezihlalo zezihlahla, ukuhlelwa kwendawo yokubuthwa, ukuvuselelwa kwamanzi angaphezulu neminye imisebenzi eminingi kuyenziwa.
Ezikhathini ezedlule, imisebenzi yabaqwayizi ngeziphakamiso zesizini entsha kuhlelwa ukuthi ilethwe ngenkathi ebusika. Isikhungo i-Çambaşı Ski Center, esizosiza abasiki bengqephu basekhaya nabazwelonke, nayo izosingatha imincintiswano ezobanjelwa ezingeni likazwelonke.
ISkiers 2019-2020 ski ski izoba nesizini emnandi ngamathrekhi amasha kanye nezinsiza ezintsha zosuku nosuku.
I-Cıbıltepe Ski Centre ilungiselela ukuhamba nge-Skiing 15 / 09 / 2016 Cibiltepe Ski, Skiing Isizini ka Ilungiselela: Cibiltepe Ski Center esifundeni Kars Sarikamis phakathi ezibalulekile kwezokuvakasha ebusika izikhungo of Turkey, futhi elungiselela ski sonyaka. UMeya waseSarıkamış uGöksal Toksoy, owenza uphenyo esikhumulweni sezindiza, utshele izintatheli ukuthi umsebenzi uqhubekile ngokushesha. Ngakolunye uhlangothi, "i-Erzurum, i-Erzincan ne-Kars Winter Tourism Corridor" ngaphakathi kwenethiwekhi yomgudu wokuthuthwa kwamanzi, umqoqo wokuqoqa amanzi, indawo yokuhweba, indawo yeqhwa lezemidlalo, umsebenzi wendawo yokukhipha indawo, ngakolunye uhlangothi, imigwaqo ye-ski centre iphinde igcizelelwe, " Sarıkamış, kungakapheli iminyaka emibili kokubili izimali zikahulumeni nezomkhakha ...
I-Bayraktepe Ski Centre Ukulungiselela Isikhathi Sebusika 18 / 11 / 2013 Ukulungiselela Winter Ski Isizini Bayraktepe: Bayraktepe asebenza Sarıkamış Ski Centre, okuyinto ingenye ski resort ezinkulu eTurkey, waqala amalungiselelo for the nobusika. Ephakathi kwamahlathi aseSarıçam futhi eyaziwa ngeqhwa layo le-crystal, imisebenzi eyenziwa ngezakhiwo zemishini kanye nemigwaqo e-Bayraktepe Ski Centre yashesha. Okhulumela i-AA uthe uMbusi Muhammad Gurbuz, okhulumela i-AA uthe ngaphambi kokuba kufike inkathi yasebusika endaweni yokugijima kanye nezindawo zokufakelwa kwemishini, waqala ukusebenza ngesondlo nokulungiselela. Sarikamish kanye utshalomali esenziwe ngokwesigatshana ezokuvakasha ebusika nge amaphrojekthi Gurbuz esishoyo kwakuzoba inkanyezi Turkey obukhazimulayo, "Winter umongo umsebenzi wokwenza amalungiselelo kanye 8 9 evulekile ukugcwaliswa nemisebenzi yokululama ...
ISarıkamış Ski Center Ilungiselela Isizini Yobusika 18 / 09 / 2019 Governor Izintandane Kars eTurkey, egcwele kwenkanyezi ekhanya eTurkey ezokuvakasha ebusika futhi 2019-2020 nophenyo wathola Sarıkamış Ski Center uzilungiselele for the nobusika. Governor Izintandane eTurkey, okokuqala njengoba ukwakhiwa uyaqhubeka futhi Turkey kuphela Sarıkamış Ski Center okuzokwenziwa ngayo enkonzweni irherho le-closed futhi 6 enezihlalo usofa nge amahora 3 izinkulungwane zabantu ukusisingatha isistimu ski lift e 2 angu ubude, imishini mechanical, kukhanyisa 4 angu ebudeni evulekile umgwaqo omusha we-slalom kanye neziphathimandla zazisiwe ngomsebenzi owenziwe. UMbusi wabe esakha iKütük Ev ngezindawo zokuhlala, indawo yokudlela nezindawo zasendlini.
I-Yildiz Intaba ilungiselela inkathi entsha ye-ski 27 / 07 / 2015 I-Yıldız Intaba ilungiselela inkathi entsha ye-ski: Ukulungiswa kuyaqhubeka ukuthuthukisa izinga lomgwaqo kanye nekhwalithi ye-Yıldız Mountain Winter Sports Tourism Centre ngenkathi entsha. Ngokwesitatimende esibhaliwe esivela ku-Sivas Special Provincial Administration, uNobhala Jikelele we-Salih Ayhan, ukuhlola umsebenzi emgwaqweni nasezindaweni ze-ski centre, wathola ulwazi oluvela eziphathimandla. Ebhekisela emisebenzini yomgwaqo i-Ayhan, i-Yıldız Mountain Winter Sports Tourism Centre, ephakathi kwamaphrojekthi okuhlonishwa kweziko, yathi imisebenzi iyaqhubeka nokuthuthukisa izinga lomgwaqo kanye nekhwalithi. I-Ayhan inikeza ulwazi mayelana neprojekthi yomgwaqo we-82 kilometer phakathi kwe-Çermik eshisayo ne-sezindiza kanye nendawo.
U-Erciyes Ukulungiselela Isikhathi Sezulu 14 / 11 / 2015 Isikhathi se-Erciyes se-Ski silungiselela: Uhlolo lwe-Erciyes Ski Center lokusesha nokulondolozwa lubekwe ukuze kulungiswe inkathi entsha. Ukusesha nokuzivocavoca kwaqhutshwa e-Erciyes Ski Centre ukuze kulungiswe inkathi entsha. UMasipala waseKayseri Metropolitan u-Erciyes AS ukusesha, ukuphepha nokuphepha komgwaqo kanye namaqembu e-Gendarmerie Search and Rescue (JAK) ekusebenziseni okwenziwe nge-8 abagibeli abanjwe yi-cable car, basindiswa ngempumelelo. Ngokusho kweso simo, i-ropeway lapho umuntu we-8 wayeseSangweni lakhe lakwa-Hisarcık wayema ​​ngemuva kwesikhathi esithile ngenxa yokuhluleka kwezobuchwepheshe. Amaqembu okuxwayisa ukungasebenzi kahle, weza endaweni yesehlakalo ngokushesha. Amaqembu athatha izinyathelo zokuphepha ngokuqhuba umsebenzi wokuzimisela insimu,
Ijubane Likhawulelwe Liguqulwe e-Antalya
UCylinder Compacted Concrete Road Road Waqala e-Ordu
I-Cıbıltepe Ski Centre ilungiselela ukuhamba nge-Skiing
I-Bayraktepe Ski Centre Ukulungiselela Isikhathi Sebusika
ISarıkamış Ski Center Ilungiselela Isizini Yobusika
I-Yildiz Intaba ilungiselela inkathi entsha ye-ski
U-Erciyes Ukulungiselela Isikhathi Sezulu
I-Salda Ski Centre Ilungiselelwe Isikhathi Sebusika